Tababar xirfadeed oo sara loogu qaadayo noolasha haweenka
Muqdisho, Soomaaliya- "Waxaa ka dambeysa oo loo maraa cilmi in qof laga soo saaro xiliyada mugdiga ah," sidaasi waxaa sheegtay Zamzam*, oo kamid ahayd 30 haween ah oo ka qeyb-qaadanayey barnaamijka tababarka xirfadeed ee ay bixisay xarunta hormarinta haweenka Soomaaliyeed ee (SWDC).
Habka wax qorista iyo wax aqriska aas-aasiga ah ayaa la baray haweenka waxaana bilaw ahaan loogu baray xirfadaha kale ee ay ku kaabi doonaan noolashooda.
Haweenkaan, oo dhammaantood ah dad ka badbaaday dhibaatooyinka dhanka bulshada ka soo gaartay ayaa waxa ay qaabeynayaa isku xirnaan taa oo hadda lagu xoojinayo waayo-aragnimo guud oo xooggan. Inta hawshan ay socotay bishii Feberaayo ayaa mid kamid haweenkaasi waxa ay ka hadashay sida loo barto in wax loo aqriyo loona qoro taa oo badaleyso is dhexgalkooda. " Hadda waxa aan wax isugu qornaa fariin qoraaleed teleefoonka," Tan waa wax xusid mudan waayo bilooyin ka hor waxna ma ysan qori karin mana aqrin karin.
Zamzam oo ah hooyo jirta 42 sano ayaa ku faaneysa inay qoreyso magaceeda ayna xisaab dejin fudud sameyneyso marka ay ka shaqeyneyso dukaankeeda oo ku yaal suuqa. Waxa ay ku firfircoon tahay xaqiijinta in carruurteeda ay helaan waxbarasho, "Waxa aan macalin u noqday carruurteyda! Waxaan rabaa inaan hubiyo in iyaga xitaa ay bartaan inay wax akhriyaan ayna qoraan."
Zamzam waxa ay rajo wanaagsan ka leedahay mustaqbalkeeda; waxa ay rabtaa inay bilaawdo ganacsi harqaan tolid ah, 'Waan ogahay in aysan fududeed moqon doonin balse waan u diyaar ahay caqabad kasta oo iga hor imaaneyso."
Ubah iyana*, tababarka la siiyey waxa ay ugu dhigan tahay in la siiyey labadeeda carruur. Waxa ay da’deeda jirtaa 24 sano waxa ayna cillaan u saartaa deriskeeda oo lacag ay kaga qaadataa.
Macalinka Xirfadaha qurxinta Cilaanka ayaa u bilaaway inay yeelato hal abuur ayna ku hanweyn tahay inay barato.
Ubax waxa ay sidoo kale ka qeyb qaadatay fasalo lagu barto cunto karinta, "Waxa aan isticmaali doonaa cilmiga aan ka helay cunatada si aan ugu sameeyo carruurteyda cunto badan oo nafaqeysan," ayey tiri.
Fasalada ayaa sidoo kale lagu bixiyey sara u qaadista xirfadaheeda bulsho, "Waxa aan awooday inaan saaxiibo ka dhex sameysto fasadalada waxaan hadda leeyahay dad badan oo aan isku taariikh nahay aana wax isla sii baran karno."
Magacyada waxaa loo badelay sababo gaar ah
Sheekada waxaa texgelinteeda leh Hey’adda SWDC
Home Tababar xirfadeed oo sara loogu qaadayo noolasha haweenka